alkisahkasih: Dongeng cindelaras versi bahasa Shona
Raden Putra ndiye mambo Janggala. Akaperekedzwa ane Vahosi ane mutsa uye ane murongo yakaisvonaka. Zvisinei, murongo Mambo Raden Putra ane godo neshanje kurutivi mambokadzi. Ndiye hurongwa kwakaipa Empress. "Aifunga, ndakava Empress. Ndaifanira kuwana nzira yavangabata mambokadzi, "akafunga.
Murongo mambo, vakarangana chiremba youmambo. Iye vainyepedzera kurwadziwa. chiremba roumambo pakarepo akadana. The murapi akati kuti munhu akanga aisa muchetura mune zvokunwa mwanasikana wamambo. "Murume akanga wekubhabhatidzwa mambokadzi Mambo pachake," akadaro chiremba. Sire achatsamwa kunzwa tsananguro chiremba youmambo. Iye pakarepo arayira patihnya dzokurasa Vahosi sango.
Huru vizier pakarepo akauya Empress aiva nepamuviri nayo kurenje. Asi, patih vakachenjera hazvina kumuuraya. Zviripachena ari patih munotoziva murongo zvakaipa vavariro yamambo. "Mr mwanasikana kuti asanetseka, ndichaita vaudze mambo kuti muchindakadzi rave muranda kuuraya," akadaro Duke. Kumunyengedza namambo, nashe pamusoro smearing munondo wake neropa tsuro vakabatwa. Ndindoudza mambo kugutsikana kana ishe nezvembiri kuti akanga auraya Empress.
Pashure pemwedzi mishomanana yokuva mumasango, mwana akaberekwa Empress. Mwana akapiwa zita Cindelaras. Cindelaras vanokura kuva mwana ari akazochena uye akanaka. Kubvira pauduku akanga shamwari nemhuka yomusango yokugara. Rimwe zuva, apo yakanga kutamba, gondo akadonhedza zai. "Aaa, gondo rakanga rakanaka. Iye nemaune kupa mazai kwandiri. "Pashure pevhiki nhatu, Mazai. Cindelaras wakanyatsotsvaka anova kako. The nhiyo ikure kuva jongwe akanaka uye simba. Asi paiva nomumwe oddity. Ruzha richikukuridza roosters akanga zvechokwadi zvinoshamisa! "Kukuruyuk ... ishe Cindelaras, imba yake pakati nomusango, pedenga yemichindwe mashizha, baba vake Raden Putra ..."
Cindelaras akashamiswa kunzwa richikukuridza huku uye pakarepo akaratidza mai vake. Zvadaro, mai Cindelaras vaparidze kwakatangira nei vakanga vari musango. Kunzwa nyaya kwaamai, Cindelaras akatsunga kuenda mumuzinda uye anofumura mambo zvakaipa vavakasiya. Pashure akabvumira mai vake, Cindelaras kuenda kumuzinda vaine jongwe. Kana ari kosi kune vamwe vanhu vari yokuzogumbura huku. Cindelaras ipapo ashevedzwa penyabung huku. "Uyai, kana iwe angatsunga, huku adulah jantanmu chicken yangu," iye akapikisa. "Zvakanaka," akapindura Cindelaras. Kana pitted, zvinoitika Cindelaras jongwe kurwisana gallantly uye munguva pfupi, anogona kurova nemuvengi waro. Pashure kakati pitted, huku Cindelaras amborohwa. The huku zvainyatsondikododzvora oma.
News pamusoro noukuru huku Cindelaras rakakurumidza. Raden Putra aiva nhau. Zvadaro, Raden Putra akakumbira hulubalangnya kukoka Cindelaras. "Mushumiri rakatarira Changamire," akadaro Cindelaras nomutsa. "Mukomana wacho ari akanaka uye akangwara, zvinoita sokuti haasi wedzinza kumhomho," akafunga mambo. Chicken Cindelaras pitted chicken Raden Putra mumwe ezvinhu, kana huku Cindelaras kurasikirwa ipapo aida musoro wake wakatemerwa kure, asi kana iwe kuhwina ipapo hafu fuma huku Raden Putra Cindelaras ndezvaJehovha.
huku mbiri dzairwiwa gallantly. Asi munguva pfupi, huku huku Cindelaras vakakunda King. Vateereri vakafara uye vakafara Cindelaras huku. "Hoo ndinobvuma kukundwa. Ndichaita vimbiso yangu. Asi ndiwe, jaya? "Akabvunza Mambo Raden Putra. Cindelaras pakarepo hwakakungwa zvakadai kuzevezerana chinhu ari huku yake. Kwete yakadini huku pakarepo yakarira. "Kukuruyuk ... ishe Cindelaras, imba yake pakati nomusango, pedenga emichindwe, baba vake Raden Putra ...," jongwe rakarira kakawanda. Raden Putra romuromo Cindelaras jongwe richikukuridza. "Ichokwadi here?" Akabvunza mambo nekushamisika. "Hongu Sire, zita Cindelaras muranda, muranda Empress mai vamambo."
Panguva iyoyowo, huru vizier pakarepo rakatarira uye kutaura zvose zviitiko chaizvo yakaitika Vahosi. "Ndakakuzivisai akakanganisa," akadaro Mambo Raden Putra. "Ini achakupai chirango chakarurama tenzikadzi wangu," akadaro Mambo akatsamwa. Zvadaro, murongo Raden Putra akaendeswa kuutapwa musango. Raden Putra pakarepo akamugumbatira uye ruregerero nezvikanganiso zvake Pashure paizvozvo, Raden Putra uye vatungamiri vakanga nokukurumidza akanhonga Vahosi sango .. Pakupedzisira Raden Putra, Empress uye Cindelaras anogona vaironga kuunganazve. Mushure Raden Putra akafa, Cindelaras kutora panzvimbo yababa vake. Akatonga nyika yake zvakanaka uye nouchenjeri.